Aukey Inotakurika Yemubhedha Mwenje [KUDZIDZISA] | Gadget nhau
Aukey inotakurika yemubhedha tafura mwenje [KUDZIDZA]
Karim Hmeidan | | Updated on 06/03/2021 19:39 | Gadgets
Nyika yezvigadzirwa zvinotishamisa zvakanyanya uye zvakanyanya. Tine zvakawanda uye zvakangwara uye / kana zvisina waya zvishandiso zvinotibatsira nemabasa ezuva nezuva. Kubva pawachi wachi, vacuum cleaners, kusvika kumagadget ekugadzirira isu kuti titaurirane nezuva. Nhasi tinokuunzira iyo mwenje mutsva wemubhedha wemubhedha kubva kuAukey, one mwenje unotakurika wakakwana wehusiku hwedu hwekuverenga. Ramba uchiverenga kuti isu tinokupa iwe zvese zvese ...
Aukey inozivikanwa nekugadzira zvigadzirwa zvemarudzi ese, chiratidzo chinozivikanwa mune akati wandei vatengesi vetekinoroji mune ino kesi inotitorera a yakakwana inotakurika yemubhedha tafura mwenje kuti ipe akasiyana mamiriro kune edu husiku. Tinofanira chete kuchaja kuburikidza ne USB-C port kuti yakavanda pakavanda mune rimwe remakona ayo. Ipapo tinogona kuishandisa hapana chikonzero chekuvharirwa pakati pemaawa mashanu nema5 zvinoenderana nekusimba kwechiedza, chimwe chinhu chinoita kuti chinyatsonakidza.
Kana zviri zvechiedza icho chinoburitsa, chinhu chinonyanya kufadza murambi, anokwanisa kuvhenekera kamuri pasina matambudziko. Hongu, haisi siringi yegirobhu kana mwenje wakajairika, asi munzvimbo ine rima inozovhenekera mukamuri rauri pasina matambudziko.
Chakanakisisa pane zvese ndechekuti mashandiro ayo haakwanise kuve nyore. Pamusoro tinowana simbi chikamu icho chingobata icho chinoita kuti mwenje ubatidze. Kuibata pasi tichawana kudzima mwenje kuitira kuti zvienderane nezvatinoda.
In the Pazasi tinowana bhatani remodi iro rinotibvumidza isu «chirongwa» icho kuitira kuti kana iwe uchinge wabaya, iro rinoburukira pane rakadzikira musimboti modhi, simba rinozotibvumidza isu kuverenga tisingakanganise watinogara naye. Tichawana zvakare a color Selection ichatibvumidza kusiyanisa iwo ruvara rwechiedza pakati peanodziya mwenje, kutonhora mwenje, kana isingaverengeke huwandu hwemavara izvo zvinogona kutosiyana.
Isu tatokuudza kuti hapana chekunyora kumba nezvazvo, asi panguva imwe chete Iyo gadget iyo isu pasina mubvunzo tichazoshandisa mazuva ese tisati tarara. Kana iwe uchitsvaga iyo akasiyana mwenje wemubhedha tafura mwenje usazeze kuwana iyi Aukey Tafura Yemwenje. Iwe unayo inowanika paAmazon, ye mutengo we € 29,99, saka usazeze uye Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » Aukey inotakurika yemubhedha tafura mwenje [KUDZIDZA]
Huawei anoda kuenderera mberi aine yakanakisa yekupeta nhare neMate X2 kunyangwe Google